Ny sidina Amman sy Bahrain mankany Baghdad dia nofoanana taorian'ny ahiahy
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny sidina Amman sy Bahrain mankany Baghdad dia nofoanana taorian'ny ahiahy
Janoary 5, 2020
Namoaka fanambaràna tamin'ny antsipirihany fa nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny serivisy eo anelanelan'i Amman sy Baghdad ny mpitondram-pirenena nasionalin'i Jordania.
Nampiato ny sidina avy any Bahrain ka hatrany Baghdad sy Najaf ihany koa ny Gulf Air, noho ny famonoana ny komandy Iraniana ambony tao amin'ny airstrike amerikana teo akaikin'ny seranam-piaramanidin'i Baghdad.
Ny sidina Royal Jordanian mankany Basra, Erbil, Najaf, ary Sulaymaniyah dia miasa ara-dalàna araka ny fandaharam-potoana. Ny sidina dia miasa sidina 18 voalamina isan-kerinandro eo anelanelan'ny Amman sy Baghdad.
Ny fanambaràn'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia tonga taorian'ny famonoana ny jeneraly Iran Soleimani tamin'ny herinandro lasa teo noho ny fitokonan'ny drôna amerikana notarihin'ny filoha amerikana Trump.
Ny biraon'ny fizahantany afrikanina dia manao antso maika any Iran sy Etazonia
Mpizahatany alemà enina no maty tany South Tyrol, Italia